Maitiro ekutamba World of Warcraft paGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe vazhinji uye vashandisi vari kushandisa Gnu / Linux pane desktop yavo, iyo nhamba yeWorld of Warcraft vatambi yakakura. Mutambo uri kutsvaira pakati pevechidiki uye kwete mudiki kudaro. Mutambo uri weWindows, asi izvo zvinogona kumhanya paGnu / Linux. Tevere, isu tichaenda kukuudza maitiro ekuisa World of Warcraft pane yako Gnu / Linux kugovera, usingashandisi VirtualBox chaiyo muchina.
Kune izvi isu tinoshandisa mapurogiramu maviri: Waini uye Winetricks. Ose ari maviri anowanikwa pane chero Gnu / Linux kugovera kunze uko; uye kana ukasava nazvo mumatura, anowanikwa mu iyo yepamutemo webhusaiti yeWine.
Kubva pano isu tinonyora mirairo nemaitiro sekunge tiri kushandisa Ubuntu, asi zvinoshanda kuneese kugoverwa, chinhu chega chichava chakakosha. shanduko ndiwo wekumisikidza rairo kune inoenderana yekuisa rairo zvakakodzera kugovera kwako.
Isu tinoisa Waini neWinetricks:
Iye zvino tinofanirwa kugadzirisa hwindo reWinetricks. Mariri tinofanira kusarudza e gadza Corefonts uye raibhurari ie8. Iye zvino tinofanirwa kugadzirisa Waini. Kuti tiite izvi tinovhura Winecfg, iyo Wine gadziriso faira.
Muwindo rekumisikidza, chekutanga isu tinofanirwa kumaka Windows 7 seyakajairika sisitimu yekushandisa. Izvi zvakakosha sezvo Battle.net isisatsigire ekare mashandiro masisitimu. Ipapo isu tinofanirwa kuenda kuStaging tab uye isu tinosiya CSMT, VAAPI uye EAX yakatarwa.
Iye zvino tinofanirwa kurodha pasi chirongwa cheBlizzard, Battle.net. Hondo.net tinogona kuiwana kubva yepamutemo Blizzard webhusaiti. Kana tango dhawunirodha pasuru yacho, tinodzvanya pairi uye kumisikidza iyo Battle.net ichatanga. Mushure mekuisa Battle.net, tinofanirwa kuisa World of Warcraft kuburikidza neichi chishandiso, painopedza kuisa, bhatani re "Play" richaonekwa paBattle.net. Isu tinodzvanya uye World of Warcraft ichashanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Maitiro ekutamba World of Warcraft paGnu / Linux
Linux Tlaloc akadaro
Usataure nezvekuita zvinoenderana nevatyairi uye makadhi evhidhiyo, uye usaise mapikicha anopwanywa negonzo rako pabasa ...
Pindura kuLinux Tlaloc
Mhoroi, asi kuti iwe uve nesarudzo yekufananidza, unofanirwa kuisa waini-kutepfenyura
Zviite shasha yako.